Nzvimbo dzepamusoro dzeUS dzekuchengetedza mari nekugara muhotera pamusoro peAirbnb
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Nzvimbo dzepamusoro dzeUS dzekuchengetedza mari nekugara muhotera pamusoro peAirbnb
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hawaii Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Resorts • Shopping • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Nzvimbo dzepamusoro dzeUS dzekuchengetedza mari nekugara muhotera pamusoro peAirbnb.
Nzvimbo dzekurojesa zororo dzinopa kugara kwakasarudzika nenyaya dzekutaura, uye rega vanogamuchira vatore imwe mari pavanenge vari kunze kweguta, asi zvichiri zvakachipa zvakadaro?
Avhareji yemutengo wehusiku hwekamuri yehotera mbiri padyo neWaikiki Beach ingori madhora makumi manomwe nemana, nepo pakugara kweAirbnb kwakafanana, inodhura iwe $74.
Kugara kwehusiku pedyo neGrand Teton National Park kwaingoita $231 chete muhotera asi $847 inokwana muAirbnb.
Wese munhu anoda kuzorora pano neapo, uye zororo inzira yechokwadi-moto yekuzorora uye kuita ndangariro nyowani. Nekudaro, mari yezororo inogona kuwedzera iwe usati waziva uye vazhinji vedu tingade kunyura pazviitiko zvinoshandura hupenyu, zviyeuchidzo, uye chikafu chekunze, pane kuridza bhajeti mukamuri.
Zvakaoma kuziva kuti ndeupi rudzi rwepokugara rwakanakira bhajeti yako. NeAirbnb inowanikwa munenge madhorobha ese, kubva kuLondon kuenda kuHong Kong, zviri nyore kupfuura nakare kose kuhaya.
Nyanzvi dzemaindasitiri dzakaongorora mitengo yezvirongwa zveAirbnb uye mahotera munzvimbo makumi masere epamusoro ekufambisa, muUS nepasirese, kuratidza kuti ndeipi nzira yekugara ine bhajeti.
Chikamu Chekuchengetedza: 72.86%
Iyi inoshamisa paradhiso yeHawaii inogara mukati meHonolulu nharaunda paOahu Island. Inozivikanwa nemhenderekedzo dzayo chena-jecha uye kudzikama kwakadzika gungwa rebhuruu, Waikiki inokwezva zviuru zvevashanyi gore rega rega uye ndiyo nzvimbo huru yezororo pachitsuwa ichi.
Kunyangwe iyo nzvimbo ine anopfuura mazana matatu enzvimbo dzeAirbnb, mahotera nenzvimbo dzekutandarira dzinotonga pamhenderekedzo. Mitengo yavo inosiyana zvakanyanya uye kuwana zveumbozha senge dziva uye spa zvinogona kureva kuti unopedzisira wabhadhara zvakanyanya.
Asi avhareji mutengo wehusiku hwekamuri yehotera mbiri pedyo Waikiki Beach ingori madhora makumi manomwe nemana, nepo kugara kweAirbnb kwakafanana, kunodhura iwe $74! Kune 271% markup, vanoenda kuzororo vangave nani pakusarudza sarudzo yechinyakare.
Chikamu Chekuchengetedza: 72.79%
Paunofunga nezvemapaki emunyika eUnited States, Yellowstone, Yosemite kana Zion zvimwe zvinopinda mupfungwa. Nekudaro, iyo yakaenzana inokwezva nyika ye Grand Teton National Park inokwezva mhomho yevashanyi vari kutsvaga mafambiro.